गर्भवस्थामा थाइराइडको स्क्रिनिङ कतिको आवश्यक ? | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
गर्भवस्थामा विभिन्न समस्याहरु उत्पन्न हुन्छन् । शरीर दुख्ने, अल्छि लाग्ने खान मन नलाग्ने, स्वाँ-स्वाँ हुने जस्ता सामान्य समस्याहरु हुन्छन्, जुन बच्चा जन्मेपछि आफैं कम भएर जान्छ । तर, यदि गर्भवस्थामा अन्य कुनै रोगका संकेतहरु देखियो भने यसले आमा र बच्चा दुवैलाई हानी पुर्याउन सक्छ । गर्भवस्थामा देखिने विभिन्न रोगहरु मध्ये थाइराइड पनि एक हो ।
हिजोआज थाइराइड सामान्य रोग भैसकेको छ । जसरी सुगर र ग्यास्टि्रक रोगलाई सामान्य मानिन्छ, अहिले थाइराइडलाई पनि सामान्य रोग नै मान्न थालिएको छ । यो रोग हिजोआज प्रायः व्यक्तिमा देखिने भएको कारणले पनि यसलाई सामान्य मानिएको हो ।
ज्ञान विज्ञानगर्भवस्थामा थाइराइडको स्क्रिनिङ कतिको आवश्यक ?
जापानको एक बौद्ध मन्दिरमा रोबोट पुजारी छ। यसले मानिसलाई करुणाको बारेमा शिक्षा दिन्छ। यस रोबोटले मन्दिर...